प्रधानमन्त्री ओली अस्पतालबाट डि,स्चा,र्ज
काठमाडौँ । दोस्रोपटक मिर्गौलाको सफल प्र,त्यारोपणपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली डि,स्चार्ज भएका छन् । दश दिनदेखि महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भ,र्ना भएर उपचार गराइरहेका प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सु,धार भएपछि
कोरोना भाइरसवि,रुद्ध सार्क राष्ट्रसँग मिलेर अघि बढ्न तयार छौँ – प्रधानमन्त्री ओली
काठमाण्डौ । मिर्गौला प्र,त्यारोपणपछि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचाररत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सामाजिक सञ्जालमा स,क्रिय हुन थाल्नुभएको छ । डाक्टरको अनुमतिपछि उहाँले शुक्रबारदेखि ‘ट्या,ब्लेट’ प्रयोग गर्न थाल्नुभएको हो। ट्याबलेटमार्फत प्रधानमन्त्री
आज साँझ अस्पतालबाट डि,स्चार्ज हुँदै प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शुक्रबार साँझ अस्पतालबाट डि,स्चार्ज हुँदैछन् । १२ दिनदेखि अस्पतालमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली शुक्रबार साँझ डि,स्चार्ज हुन लागेको त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका कार्यकारी निर्देशक प्रा.
प्रधानमन्त्री ओली अस्पताल भ,र्ना भएपछि सु,स्तायो सरकारी काम र राजनीतिक ग,तिवि,धि
काठमाडौं । मुलुककै कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मिर्गौला प्र,त्यारोपणका लागि अस्पताल भ,र्ना भएपछि सरकारी कामका,रबाहीका साथै राजनीतिक गतिविधि सु,स्ताएको छ। सिंगो देशको ध्यान प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा केन्द्रित भएकाले
प्रधानमन्त्रीलाई राधिकाले भेटिन्, ओलीलाई भेट्ने उनी दोस्रो ब्यक्ति
काठमाडौं, २९ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उनकी पत्नी राधिका शाक्यले अस्पताल पुगेर भेटेकी छिन्। प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष भेट गर्ने उनी दोस्रो ब्यक्ति हुन् । दोस्रो पटक मिर्गौला प्र,त्यारोपण गरेर
‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दा,ह्री आफैँ का,ट्नुभयो’
काठमाडौं, २८ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा सन्तोषजनक सु,धार भइरहेको छ । गत बुधबार दोस्रो पटक मृगौलाको प्र,त्यारोपण गराउनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीको सबै रिपोर्ट सामान्य रहेकाले स्वास्थ्यमा सु,धार देखिएको
प्रधानमन्त्री ओली स,क्रि,य रुपमा कामगर्न ६ महिना लाग्छ – डा. दिव्यासिंह शाह
काठमाडौं । एक साता अघि मिर्गाैला प्र,त्यारोपण गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अझै केही दिन अस्पताल ब,स्ने भएका छन् । एक साताअघि गत बुधबार (२१फागुन)मा मिर्गौला प्र,त्यारोपण गरेका प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री ओली अझै केही दिन अस्पतालमै
काठमाडौँ । मिर्गौला प्र,त्यारोपणपछि राजधानीको महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा स्वा,स्थ्यलाभ गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अ,नुमानित मितिभन्दा ढिलो डि,स्चार्ज गरिने भएको छ। ओलीलाई आज मंगलबारसम्म डि,स्चार्ज गरिने उनको उपचारमा सं,लग्न चिकित्सक
आज डि,स्चार्ज हुँदै प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । मिर्गौला प्र,त्यारोपण गरेको सात दिनपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली मंगलबार दिउँसो अस्पतालबाट डि,स्चार्ज हुने भएका छन् । ओलीको स्वास्थ्य अवस्थामा निकै सुधार भएकाले उनलाई डि,स्चार्ज गर्ने अस्पतालको तयारी छ
वि.स. २०४८ सालमा झापा क्षेत्र नम्बर ६ देखि प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भए पछि वर्तमान प्रधानमन्त्री खडक ओली अहिले २०७४ सालमा भएको निर्वाचनसम्म आईपुग्दा कहिलै चुनावमा हारको सामना गर्नु परेन